Doorashadiisa Bale & Inuu kursiga keydka dhigay Benzema, siduu ahaa safka Asensio uu ku ciyaaray ciyaar-gacameedka FIFA 20? – Gool FM
(Madrid) 23 Mar 2020. Weeraryahanka Real Madrid ee Marco Asensio ayaa xoogaa kooban ka beddelay safka joogtada ah ee kooxdiisa, isagoo ku ciyaarayay tartanka ciyaar-gacmeedka ee Ibai Llanos’ LaLiga Santander Challenge tournament.
Asensio ayaa ku matalayay tartanka ciyaar-gacmeedka ee FIFA 20 kooxda Los Blancos, isagoo garaacay Granada laacibkeeda Jose Antonio Martinez si uu ugu soo gudbo wareegga siddeed-dhammaadka.
Laacibka reer Spain ayaa gool ku dhaliyay magaciisa iyo Eden Hazard guushii uu ku gaaray 2-0, isagoo doortay inuu Karim Benzema kursiga keydka dhigo.
Safka Real Madrid ee uu kusoo billaabay Asensio ciyaar-gacmeedka uu ciyaarayay ayaa ahaa sidan: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Marco Asensio, Eden Hazard iyo Gareth Bale.
Waxaa xiiso gaar ah leh in Mendy uu doorbiday isagoo heysta Marcelo, halka Hazard iyo Bale uu weerarka ka dhigay, isagoo dafiray Benzema.
Ciyaartoyda ka ciyaarta horyaalka La Liga ayaa kooxahooda ku matalaya tartan ciyaar-gacmeed ah oo ay kooxaha horyaalkaas ka ciyaara ay ku tartamayaan inta uu xanniban yahay horyaalkooda.
Safkii ugu qaalisanaa sanadkii 2006 oo la shaaciyey… (Ronaldinho oo hoggaaminaya iyo Chelsea oo afar laacib ku leh!)